Times Of Nepali » प्रचण्डले २० अर्ब भ्रस्टाचार गरेको थाहा पाएर माओबादी पार्टी छोडेको हुँ : बाबुराम भट्टराई -(हेर्नुस् भिडियाे)
काठमाडाैं : संविधान निर्माणमा विशेष भूमिका निर्वाह गरेका बाबुराम भट्टराईले २०७२ साल असाेज ३ गते नेपालकाे संविधान जारी भए लगत्तै तत्कालिन माओवादी पार्टी छाेडेर सबैलाई चकित बनाए । उनले त्यसकाे रहस्य भने तत्कालै खुलाएनन् । त्यसकाे केही समयपछि नयाँशक्ति पार्टी निर्माण गरे । अहिले आएर समाजवादी पार्टीमा गाबियाे उनकाे त्याे पार्टी पनि । उसाे त प्रचण्ड नेतृत्वकाे माओवादी पार्टी पनि एमालेभित्र समाहित भैसकेकाे छ । एक हिसाबले भन्दा २०५२ सालमा निर्माण भएकाे तन्नेरी दलकाे अस्तित्व नामेट भैसकेकाे छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईकाे दाबी नै छ कि प्रचन्डले मात्र एनसेल प्रकरणमा २० अर्ब खाएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आफूले माओवादी पार्टी छाड्नुको कारण त्यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार रहेको बताएका छन् । भ्रष्टाचार पनि अरू कसैले नभएर स्वयं प्रचण्डले गरेको भट्टराईको दाबी छ ।
तत्कालीन माओवादी पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादीका लडाकुका निम्ति राज्यबाट गएको करिब २० अर्ब रकम भ्रष्टाचार गरेको डा. भट्टराईको गम्भीर आरो प छ । प्रचण्डले सो रकम पचाउनका लागि विदेशी प्रभु गुहारेको आरोपसमेत भट्टराईले लगाएका छन् । यसैगरी, प्रचण्डले ७०० हतियार विदेशी दलाललाई बेच्न लागेको, तर आफूले सो हुन नदिएकोसमेत डा. भट्टराईले खुलासा गरेका छन् ।
लामो समयसम्म प्रचण्डसँग सहकार्य गरेका र मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका भट्टराईले दिएको अभिव्यक्तिलाई ‘एकजना पूर्वमाओवादी’को सामान्य आक्रो शका रूपमा मात्रै लिनु किमार्थ उचित हुँदैन । कुनै सामान्य लडाकु वा कार्यकर्ताले लगाएको आ रोप थियो भने त्यसलाई आक्रो शको अभिव्यक्ति मान्न सकिन्थ्यो होला । तर, पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईजत्तिको ‘हेभीवेट’बाट आएको अभिव्यक्तिलाई आमसर्वसाधारणले कुन रूपमा बुझ्ने ?
यस सम्बन्धमा प्रचण्डका तर्फबाट कुनै पनि खण्डन आएको छैन । यदि डा. भट्टराई सही थिएनन् भने प्रचण्ड कानूनी उपचारमा लाग्नुपर्ने हो । तर, प्रचण्डद्वारा यसको कुनै खण्डन नहुँनुले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । भट्टराईको अभिव्यक्तिमाथि प्रचण्डबाट कुनै प्रतिक्रिया नआउँनुले यसमा ‘मौनं सम्मति लक्षणम्’ भनेझैँ प्रचण्डको स्वीकारोक्ति देखिएको छ ।